एमाले नेताहरूको आकस्मिक बैठकबाट यस्तो निर्णय, अब पार्टी कता जाला ? - Media Dabali
काठमाडौं – नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेता माधवकुमार नेपाल लगायत ३२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेर सांसद पद नै बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका बेला बसेको नेताहरूको आकस्मिक बैठकले पार्टी विभाजन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरण दिने तर पार्टी विभाजन नगर्ने निष्कर्ष निकालिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
अध्यक्ष ओलीले सांसद पद नै बर्खास्त गर्ने योजनासहित पार्टीका ३२ नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेपछि आकस्मिक बैठक बोलाइएको हो । बैठकले तोकिएकै समयमा सबैले स्पष्टीकरण दिने समझदारी गरेको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित अर्याल होटेलमा एमालेको झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले आकस्मिक बैठक बोलाएको हो ।
अध्यक्ष ओलीले विपक्षी नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्दै कारवाही गरिराख्ने र नेपाल पक्षले स्पष्टीकरण दिँदै कारवाही भोगिरहने अवस्थामा अब नेकपा एमाले कता जाला ? हेर्न बाँकी छ ।